Ungakuhlanganisa Kanjani Ukuthengisa Kwakho Okuqukethwe | Martech Zone
NgoMgqibelo, Okthoba 31, 2015 Douglas Karr
Ngiyithokozele le infographic evela ku-JBH nendaba nezithombe ezikhiqizayo njengoba ucabanga ngokuqukethwe. Abathengisi abangama-77% manje basebenzisa ukumaketha kokuqukethwe kanti ama-69% wemikhiqizo enza okuqukethwe okuningi kunalokho abakwenzile ngonyaka odlule. Futhi njengoba wonke umuntu enokunambitheka kwe-cocktail ayithandayo, kubalulekile ukukhumbula ukuthi izethameli zakho ziyahlukahluka - abaningi bejabulela ezinye izinhlobo zokuqukethwe kunezinye.
Ukukusiza ukuthi uthuthukise imizamo yakho yokumaketha okuqukethwe i-JBH ikhethiwe IMixology ye-Content Marketing infographic - ukunikezela izeluleko zokuthi ungakuletha futhi ukuhambise kanjani okuqukethwe okwenziwe ngcono ngezibalo ezithile ezinempilo kusuka ku- I-Hubspot ne-SmartInsights iphonswe ngesilinganiso esihle!
Ngokwami, ngingeza i-coaster kuso sonke isiphuzo nge-nice shayela esenzweni. Okuqukethwe kusebenza kangcono kakhulu ebhizinisini lakho uma unikeza indlela yokuzibandakanya nokuguqulwa kanye nesiphuzo!
[box type = "download" align = "aligncenter" class = "" width = ""] Ukubona ucezu ngalunye lokuqukethwe njengokuhlanganiswa kwezingxenye zalo bekungumcabango namasu amaningi ngemuva kwe-eBook yethu esiyishicilele neMeltwater, Ungakwazisa Kanjani Ukuqukethwe Kwakho Ohambweni Lwamakhasimende Olungalindelekile. [/ ibhokisi]
Vele ukhumbule ukuthi cishe wonke umuntu uyasazisa isiphuzo sabo esihluke kakhulu kwesilandelayo. Ngingumlandeli omkhulu we-bourbon enhle neCoke, kepha ngingumuntu osindayo, ngakho-ke kune-Coke eningi kakhulu ukwedlula ama-bourbon aficionados amaningi. Ukuphindaphinda isiphuzo esifanayo kaninginingi kusebenza kuphela uma kuyisivakashi esifanayo owenza isipiliyoni sakho senze ngezifiso kaninginingi.
Njengenjwayelo, ngincoma ukwenza ukuhlolwa okuthile ukuthola isiphuzo esifanelekile. Amaqiniso athe xaxa ngasikhathi sinye, icala lokusetshenziswa eligcwalisiwe ngokulandelayo, ukuthengisa okumbalwa… konke kungaba yinhlobonhlobo oyidingayo ukuze uhehe abantu abaningi kakhulu ukuthi bahlanganyele nomkhiqizo wakho.
Tags: blogsUkukhangisa Okuqukethweizinhlobo zokuqukethwecontnet ukumaketha kwe-infographicizindaba zemboniinfographicjbhifomu elide lobuntatheliIfomu ElideI-Marketing Infographicsukuxubanaividiyo yomphakathiokuqukethwe okwenziwe umsebenzisiokuqukethwe kwegciwaneamaphepha amhlophewhitepapers